Oovimba base-Aussie-Funda ukuRhweba
I-Aussie: Emva kokuBuya emva kwexesha, ngaba i-AUDUSD ikulungele ukuTshintsha?
I-Aussie inyukele ngaphezulu, ifikelela kwinqanaba eliphezulu le-0.7745. Emva kokuphakama kwemibhobho engama-70 ukusuka kumazantsi, iye yahlala iphezulu, isusa uninzi lweelahleko zeveki. Ukunyuka kwe-Aussie kwabangelwa kukuhla ngokubanzi kwidola yaseMelika emva kokukhutshwa kwe Ingxelo yengqesho yase-US. Imirhumo inyuswe nge-559K ngoMeyi, isilela ekuqikeleleni kwaye ichasa amathuba othuko olulandelayo emva kweenkcukacha-manani zangoLwesine.
Idola lalikwimeko entle yokugqiba unyaka kodwa ngelishwa yehliswa yingxelo entle, kodwa edanisayo engeyiyo eyefama. Idatha ayitshintshanga umbono ophantsi wamagosa e-Fed, ke lixesha lokuba uthethe ngokuthetha ngokuthinta okwangoku. Impembelelo yesitofu sokugonya kunye namandla okunyuka kwamaxabiso kuya kuthatha ixesha ukubonakalisa ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, iNew Zealand yeDola ibingoyena mdlali ubuthathaka, ebuyisa ezinye zeenzuzo zakhe zamva nje. Ngaphandle kwezibalo ezomeleleyo, i-Euro yayiyeyona yesibini imbi kakhulu. Ke ngoko, ukuba i-ECB ichaza ukuba ikulungele ukuthoba isantya sokuthengwa kweeasethi kule veki, i-Euro inokubona ukujongwa, ubuncinci kuthelekiswa nedola kunye neYen. Okumangalisayo kukuba, i-Dola yase-Australia yayiyeyona yomeleleyo, kwaye inesakhono sobugcisa sokugqwesa kwixesha elizayo.
Njengoko iAussie iphakama, i-DXY yawa ngezantsi kwe-50-Day Moving Average
Kwiveki ephelileyo, ukubuyiswa kwesalathiso sedola kuye kwamiswa kwakhona, ukusilela nokufikelela kwi-50-day MA (ngoku eyi-90.71). Ngemithintelo engama-90.90 echanekileyo, umbono wexesha elikufutshane uhlala u-bearish, njengoko ukwehla ukusuka kwi-93.43 kunokwanda ukuya kuvavanyo lwe-89.20 esezantsi. Ngeli xesha, umfutho we-RSI wemihla ngemihla awunyanzelekanga ukuba kubekho ikhefu elikhulu apho.
Ngokunye ukunyuka kunye nekhefu lokuchasana kwi-90.90, ipateni yokudityaniswa esuka kwi-89.20 iya kwandiswa ibuyele kwi-93.43. Ukwaphula ngokuqinileyo i-89.20, kwelinye icala, kuya kuphinda kuqalise ukwehla ukusuka kwi-102.99 ukuya kwi-88.25 yenkxaso yexesha elide nangaphantsi. Okumangalisa kukuba, i-Aussie yagqitywa njengeyona inamandla, ngenxa yokubuyela emva kwexesha. Ngokobuchwephesha, kukho ithuba lokuba idola lase-Australia liza kuphinda libuyele kwimeko yalo yeenyanga ezintathu.
Ngokukodwa, ukutsalwa kwe-AUD / USD ukusuka kwi-0.7890 kubonakala ngathi kuye kwaphela nge-0.7644. Ugxininiso lokuqala lwale veki lukwiqondo lokumelana ne-0.7772. Ikhefu elikhulu le-0.7890 ukumelana kuya kuyomeleza le thesis ye-bullish kwaye ikhokelele ekunyukeni okukhulu ngaphezulu kwe-0.7890 yokumelana. Ngokwaphula okungagungqiyo kwe-0.7890, ukunyuka okubanzi okusuka kwi-0.5506 kulindeleke ukuba kuqhubeke kwakhona kwi-0.8006 ephezulu.
I-AUD / USD iyaliwe yiNkxaso!
I-AUD / i-USD yayikwinqanaba lokulungisa kwixesha elifutshane njengoko i-DXY inyuke kancinci. Isibini siye sehla kakhulu njengenqanaba le-0.7688 apho lifumene inkxaso eyomeleleyo. Ngokwenyani, ixabiso lifikelele kwindawo yenkxaso eyomeleleyo, ke ukubuyela umva kuyindalo.
I-USD yehla kwakhona njengoko i-US Dollar Index iwela ngaphambili kwedatha yase-US. Intengiso yentengiso kulindeleke ukuba inyuke nge-1.0% ngoMeyi xa ithelekiswa ne-9.8% ngo-Epreli, ngelixa i-Core Retail Sales ingabhalisa kuphela i-0.5% yokukhula xa kuthelekiswa nokukhula kwe-8.4% kwixesha lokugqibela lokunika ingxelo.
Ngapha koko, ukuveliswa kwemizi-mveliso, amandla okuSebenzisa amandla, kunye ne-Prelim UoM Consumer Sentiment nayo inokuzishukumisa iimarike. Ukungazinzi kunokuba phezulu malunga nale datha, ke kuya kufuneka ulumke kakhulu ukuba awungomrhwebi onamava.
AUD / USD H4 Itshati yoHlahlelo lobuGcisa!
I-AUD / i-USD yehlisiwe emva kokubhaliswa kokuqhekeka okungeyonyani ngaphezulu komgca ophakathi we-pitchfork (ml). Ngoku iye yehla ukuzama kwakhona umgca ophakathi (lml) obonwa njengenkxaso eyomeleleyo.
Inqanaba le-0.7705 libonwa njengenkxaso ye-tuli ngokunjalo, ke ukwaliwa kulo mmandla kunokubonisa ukujija okuphezulu ngaphezulu. Olunye ulwazi oluhlwempuzekileyo lwase-US namhlanje kufuneka lukhulise isibini njengoko i-DXY iya kulindeleka ukuba yehle ngakumbi
Ukwahlukana okungamanga kunye nokwahlukana okukhulu ngaphantsi komgca ophakathi ophantsi (lml) kubonisa ukukhawuleza kokunyuka kummandla wokumelana no-0.7820.
tags Aud / USD, AUDUSD, Aussie, DXY, iUSD
I-Aussie Soars kwiRally ye-Industrial Metal, i-Pound Stead kwi-PMI kunye neNtengiso yeRetail
Iziphumo zokuqala kwimakethi yase-Australia zeza emva kokudityaniswa kokusebenza eWall Street ngolwe-Sihlanu. Idola yase-Australia iyayigqwesa eyona phawundi njengeyona dola inamandla kule veki, incedwe kukubuyela kwiimarike eziyingozi. Ngokukodwa, isinyithi soshishino sihlanganisana ngamandla, kwaye ubhedu luthengisa ngaphezulu ngexesha lokubhalwa.
I-AUD / i-USD iqhubekile ne-rally yayo yemihla ngemihla ekuqaleni kweseshoni yase-US ngolwesiHlanu kwaye yabetha kwelona nqanaba liphezulu kwiinyanga ezingama-35 kwi-0.7877. Ngexesha lokubhalwa, isibini sinyukile nge-1.33% ngosuku ukuya kwi-0.7873. Uxinzelelo olungapheliyo lokuthengisa olujikeleze idola yaseMelika ivumela i-AUD / USD ukuba igcine amandla ayo okuqhubela phambili kwimpelaveki.
I-Sterling iyaqhubeka nokuthengisa njengenye yezona zinamandla ngeveki njengoko kugxilwe kwintengiso ye-UK kunye nee-PMIs. Izinto ezothusayo ezongezelelweyo zinokuphakamisa iponti kwakhona. Idola yase-Australia ihleli iyeyesibini eyomeleleyo ukuza kuthi ga ngoku.
Intengiso ethengisa e-Australia inyuke nge-0.6% mama ngoJanuwari, ngaphantsi kokulindelweyo kwe-2.0% mama. Onke amazwe kunye nemimandla, ngaphandle kweQueensland, aphakama. INew South Wales ithumele ukukhula nge-1.0% njengoko izithintelo ze-COVID-19 zancitshiswa eGreater Sydney ngoJanuwari. I-Queensland yabona ukwehla kwe-1.5%, kwaye izithintelo ze-COVID-19 zaseBrisbane zabona ukuntywila. UBen James, umlawuli woPhando oluBanzi lweKota, uthe: "Kusekho iyantlukwano kwintengiso yentengiso phakathi kwamazwe kunye nemimandla njengoko izithintelo ze-COVID-19 ziqinisiwe okanye zikhululekile kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe."
Iiponti eziSterling zihlala zizinzile kwi-PMI nakwiNtengiso yeRetail
I-Sterling iyaqhubeka nokuthengisa njengenye yezona zinamandla ngeveki njengoko kugxilwe kwintengiso ye-UK kunye nee-PMIs. Izinto ezothusayo ezongezelelweyo zinokuphakamisa iponti kwakhona. Okwangoku, iponti entle ayikhathalele ukuthengisa okuncinci kodwa ityisiwe yi-PMI kunye nezimvo eziqinisekileyo ezivela kumagosa eBhanki yaseNgilani.
Ilungu leBhanki yaseNgilani i-MPC uGertjan Vlige uthe kwintetho yakhe "Ukuba uqoqosho lukhula ngokubanzi ngokuhambelana noqikelelo lwethu oluphakathi kuFebruwari, ngoko ke, ngokokubona kwam, kusenokwenzeka ukuba kungabikho mfuneko yokomelela kwemali eyakufuneka… sizakugqiba inkqubo ebhengeziweyo yokwehlisa ubungakanani".
I-PMI yokuvelisa i-PMI inyuke yaya kwi-54.9 ngoFebruwari ukusuka kwi-54.1, ngaphezulu kokulindelweyo kwe-54.0. Iinkonzo ze-PMI zinyuke zaya kwi-49.7 ukusuka kwi-39.5, ngaphezulu kune-40.5 yoqikelelo. I-PMI edibeneyo inyuke yaya kwi-49.8 ukusuka kwi-41.2.
I-GBP / i-USD igqibe ukubetha umjikelo we-1.40 kwinqanaba le-UK ye-coronavirus ethembisayo kunye nedola ebuthathaka phakathi kokuqikelela malunga nokunyusa isivuno. Zombini izihloko kulindeleke ukuba zivuthwe kwiveki ephelileyo kaFebruwari, ngelixa idatha yezoqoqosho nayo iya kuba nexesha layo.
Ukufunyanwa kwe-Aussie kuLawulo phakathi kwe-RBA Cling, iDollar Revers Hopes Dissipate
Ukuhlaziywa: 4 Agasti 2020
Emva kokuba amandla okubuyela kwimeko yesiqhelo esasazeka, idola iyathamba kwakhona. I-euro kunye ne-franc yaseSwitzerland baphethe kwakhona, kodwa basathintelwe jikelele. Idola yase-Australia ibambe iliso elibukhali kwindlela iRBA esebenza ngayo njengoko kulindelwe. Ukuchacha kusamisiwe, kwaye iziko alikhange libonakale lixhalabile ngokonyuka kwangoko kwezinga lotshintshiselwano lweAussie. Ikhalenda yanamhlanje yezoqoqosho ilula kwaye abarhwebi bazakujonga kwimicimbi yangomso.
Ngokobuchwephesha, iDollar ayinakuqinisekisa ukubuya okuzinzileyo njengoko i-EUR / USD ifunyenwe kwikhefu elifutshane lenkxaso encinci kwi-1.1698. Imeko iyafana ne-GBP / USD kodwa yafunyanwa kwakhona emva kokufumana inkxaso encinci kwi-1.3013. I-AUD / i-USD ide ibambe inkxaso ye-0.7063.
Nangona kunjalo, la manqanaba aya kuhlala ethanda ukuphumla evekini njengoko idatha ebaluleke ngakumbi ifika. I-AUD / NZD sisibini sokujonga idatha yengqesho ezayo eNew Zealand. Ngokuncipha kwanamhlanje, kugxilwe kubuyile ngaphezulu kwethutyana kwe-1.0800 kwaye ikhefu liya kwandisa isaphulelo ukusuka kwi-1.0565 ukuya kwi-1.0880 ephezulu.
I-RBA ayitshintshi, ilindele ukuba ukubuyiswa kungalingani
I-RBA ishiye umgaqo-nkqubo wezemali ungatshintshanga, njengoko bekulindelekile, ukugcina isivuno kunye ne-AGS yeminyaka emithathu isivuno kwi-0.25%. Ibhanki ephambili ikwathembisile ngelithi "indlela yokuziqhelanisa nayo iza kuqhubeka okoko ifuneka." Ayizukunyusa inani ekujoliswe kulo kude kube kwenziwe inkqubela phambili yengqesho kunye nokunyuka kwamaxabiso.
I-RBA iqinisekisile ukuba ukwehla kwezoqoqosho "akukubi kangako njengoko bekulindelwe ngaphambili." Nangona kunjalo, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kunokwenzeka ukuba "kungalingani" njengoko ukuqhambuka kwe-coronavirus eVictoria kuya kuba "nefuthe elibi" kuqoqosho lwayo.
Imveliso iya kwehla nge -6 yeepesenti kwimeko yesalathiso ngo-2020 kwaye inyuke ngepesenti ezi-5. Ngenxa yokulahleka kwemisebenzi eVictoria, kulo nyaka inqanaba lentswela-ngqesho lingahlasela malunga neepesenti ezili-10. Izinga lokungabikho kwemisebenzi liqikelelwa ukuba lehle kancinci kule minyaka imbalwa izayo ukuya kwiipesenti ezisixhenxe. Ukunyuka kwamaxabiso kuqikelelwa ukuba kuya kuhlala kungaphantsi kwenqanaba leepesenti ezimbini kuzo zonke iiparameter ezihlalutyiweyo kule minyaka imbalwa izayo
tags Aussie, Ibhanki ye-Reserve ye-Australia (RBA)